Akụkọ - A 20'FCL NCL Otu Nzọụkwụ Crystallizer na Bellinwax rutere ahịa ndị ahịa tupu ezumike Muharram.
Otu 20'FCL NCL Otu Nzọụkwụ Crystallizer na Bellinwax rutere ngwaahịa ndị ahịa tupu ezumike Muharram.
National Chemical Laboratories dị ka anyị si mara NCL, site na mmalite mbido na ngwụsị afọ 1940 na-eme ncha na ncha ntutu maka azụmaahịa ezinaụlọ mara mma, na ọrụ ndị isi taa na ụlọ ọrụ mmezi ịdị ọcha dịka akara zuru oke, zuru ụwa ọnụ na-eweta ọrụ. NCL nọ na Philadelphia, Pennsylvania, nke nwere ọkara nde square foot Manufacture and arụmọrụ center. Ha na-eji nnukwu nrụpụta nrụpụta dị ukwuu maka mmepụta nke akụrụngwa eji eji ọtụtụ ngwaahịa anyị. Site na ngwakọta agwakọtara nke karịrị galọn nde 3 nke akụrụngwa na ngwaahịa ndị gwụchara, ụlọ ọrụ NCL bụ otu n'ime ụdị ndị kachasị ukwuu na United States. Onlọ nyocha ha, kọmpụta kọmpụta na-arụ ọrụ site na ndị ọkachamara ama ama na ụlọ ọrụ, ndị na-enyere aka ịmepụta usoro ngwaahịa ọhụụ na-enweghị atụ ma na-ekwusi ike na ngwaahịa ndị a na-agbaso ụkpụrụ njikwa ogo anyị.
National Chemical Laboratories zuru oke nso nke nhicha na mmezi usoro na-enye uru nke otu sourcing niile nke gị janitorial chemical mkpa. Ma ọ bụ ala siri ike na-agbanwe agbanwe, okwute okike ma ọ bụ nlekọta seramiiki, nlekọta kapeeti, mmemme nhicha na-acha ọcha, ebe obibi mposi, mmezi ụlọ ọrụ, nnukwu ụlọ ahịa ma ọ bụ nri nri, enwere mmemme ngwaahịa NCL iji bulie arụmọrụ ọrụ yana ịchịkwa mmefu ego.
Nkume nlekọta mmemme TM site na laabu kemịkalụ mba bụ ngwaahịa nke megoro ọtụtụ afọ nke nyocha nyocha ihu na mmepe kemịkal. Gụnyere: kristal ịgba na polishing usoro - usoro emepụtara iji mepụta nnukwu gloss marble, ihe dị mfe ma na-enwu gbaa maka ịghacha limestone na okwute Ala marịlị na - acha uhie uhie - mepụtara maka imepụta ọmarịcha marble, travertine, egweri ala na palletizing limestoneGranite polishing program - sistemụ maka inye ọfụma na mweghachi kachasị elu maka elu granite na-egbu maramara Ngwaahịa nlekọta ụlọ - usoro mmezi na nchedo zuru oke maka taịlị glazed na unglazed, taịlị e gwupụtara n'ala, taịlị saltillo, nkume Mexico na taịlị ndị ọzọ.